ब्याचलर पार्टी भन्दै प्रियंकाको मस्ती मुडले कलिउडमा मच्चियो हंगामा !! - Experience Best News from Nepal
ब्याचलर पार्टी भन्दै प्रियंकाको मस्ती मुडले कलिउडमा मच्चियो हंगामा !!
विदेश पुगेपछि यस्तो बिकिनी अबतारमा देखिन्छन् नेपाली नायिकाहरु
अन्तर्वार्तामा बोलि चिप्लिदा ट्रोलको शिकार बनेका यी तिन सेलिब्रेटी !!
फेरी सेतो बिकिनीमा हट प्रियंका !! हेर्नुहोस समुन्द्रमा खुलेकी प्रियंकाका हट तस्बिरहरु
बिमानस्थलमा आस्था राउत र महिला प्रहरी बीच हात हालाहाल भएको भिडियो सार्वजनिक !
आस्था राउत विवाद : डीआईजी भन्छन्, प्रहरीले चेकजाँचका क्रममा व्यक्ति र अनुहार हेर्दैन
इन्स्टामा बेनिशाको सकारात्मक पोस्ट, के भन्छिन बेनिशा !!